abazali abaningi bathanda ukuba babambelele isheduli umbuso yokugoma kwezingane. Nokho, ngaphandle nje enifeza imijovo ayimpoqo, kukhona imijovo ezengeziwe ezingase ukubeka ingane yakho omama obhekene nani bobaba ngokuthanda kwabo. Ingabe mina zigonyelwe upokisi ingane? Ngakho nanku umbuzo owabuzwa abadala abaningi, ngenxa yokwesaba elula, kubonakala, Uma unganakile, isifo sezingane.
ulwazi olujwayelekile mayelana isifo
Ngaphambi kokuba uye umbuzo indlela esiyidinga imigomo ngokumelene upokisi ingane kufanele sifunde okwengeziwe mayelana izifo ezinjalo. Lolu lwazi izokusiza uhlole izingozi futhi uthathe isinqumo okunengqondo kunazo.
Varicella, noma inkukhu Pox, ubhekwa kalula athathelwana ebuntwaneni isifo, uhlushwa ukuthi can izingane nje kuphela, kodwa intsha kanye nabantu abadala. It is kalula ayihambi ngokusebenzisa emoyeni futhi uyakwazi igciwane Imininingwane yabanye. I causative ejenti lesi sifo kubhekwa zoster igciwane (i-herpes, noma uhlobo 3), kungase futhi kube imbangela ezimise okwama-tile.
Ezinganeni, lesi sifo idluliswe ngempela kalula futhi ngokuvamile kwenzeka ngaphandle nanoma yiziphi izinkinga ezithile. Nokho, izibalo basikisela ukuthi ezimweni eziyishumi ekhulwini igciwane kuhambisana nemiphumela ebuhlungu (CNS nezinye izitho zangaphakathi). Ngase ngike ngaya abantu iyagula kwakheka isimiso somzimba sokuzivikela, esikhathini esizayo yengane ungesabi ngegciwane ezinjalo. Ezifo yansukuzonke zitholiwe ezingavamile kakhulu, eqinisweni ezimweni ezimbalwa (isibonelo, abantu immunodeficiency).
imiphumela olungenzeka sifo
Ake sixoxe ngalokho isidingo lokugoma ngokumelene upokisi ingane? Standard for igciwane kuhilela kwesikhathi bayashintshana ekufukameleni, khona-ke kuyinto ukuthuthukiswa isifo, avele isikhumba Bubbles womntwana, uqala sibonakalise batshelwa ekhathazayo, isifiso nekama kumiswa. Ezinsukwini zokuqala ezimbalwa kungase kube ukunyuka kwezinga lokushisa. Njengoba nje nezinduna entsha yakha phela, futhi elidala wome, inkinga isiyaphela. Lapho ngineminyaka engu-12 emibi sifo ezingavamile kakhulu, kodwa izingane izingane zabo zokuqala zibe nalo igciwane kusinda kakhulu kunezinye izingane ezincane.
yezinkinga ezingasetshenziswa zigoqela i-pneumonia, encephalitis, inkukhu Pox, tesikhumba, ukulimala kwamehlo noma emsipheni ebusweni, i-herpes, ezimise okwama-tile , ngisho nokufa. Ukugonywa ukunciphisa izingozi ezingase zibe khona futhi ukuqinisekisa lula lesi sifo.
Omunye umbuzo ethandwa abazali nesithakazelo kulesi sihloko, sifundeka kanje: "Lapho ukwenza zigonyelwe upokisi izingane?". izingane lokugoma Kwenziwa ukuyifinyelela ezingu-12. umbundu Upper kwezidakamizwa ekuphathweni alikho, imijovo kungenziwa ezinhlanu, futhi eziyishumi, futhi iminyaka yamashumi mabini.
Ukugonywa ngokumelene upokisi izingane kungaba kwenziwe ngemva kokuthintana isiguli. Kungcono ukuvakashelwa onguchwepheshe ngaphakathi kwezinsuku ezintathu emva kungenzeka ukutheleleka, kulesi simo, eyenziwa imijovo kuyodingeka esiphezulu ukusebenza. Kukhona amathuba eningi ukuthi ingane yakho ngeke ukwazi ukugwema ukugula noma ukulihambisa ngaphandle ukubonakaliswa kwangaphandle kanye nemiphumela.
imiphumela emibi yokugoma
Avuse yini imiphumela emibi yokugoma ngokumelene upokisi izingane? Uphenyo abazali abaningi aqukethe ulwazi okungekho umonakalo kusuka yokugoma ngeke akwenze. Yiqiniso, lokhu nezinye izinkinga kusobala akubona bonke futhi ngaso sonke isikhathi, kodwa uzilungiselele ngoba, yebo, izindleko. Ngakho, amazinga side effects kuvame emelelwa izinguquko ezilandelayo e isimo sezempilo:
ububomvu Local kwesikhumba endaweni ukuhlukumeza yobuqotho babo.
Ukuvuvukala, induration ngaphansi kwesikhumba.
Yokungezwani komzimba, avame ngesimo ukuqubuka kwamanzi, ephelezelwa pruritus, zesikhashana ecinene, ukuvuvukala emphinjeni.
Emaphilisini ekhanda kobukhulu ngokulinganisela.
Ukozela, ukucobeka, ukucobeka.
izimpawu Catarrhal, amakhala yisisu nokukhwehlela omnene, umphimbo obuhlungu.
Cishe zonke izimpawu ezingemnandi, kwenzeka kuzona ngokwazo izinsukwana ngemuva lokugoma, kodwa kukhona okuthiwa nemiphumela elihlehlisiwe. Ngokuvamile zenzeka ezinsukwini 15-20 futhi aqukethe ekubukekeni kuqhuma ukukhanya, izinga lokushisa ongaphakeme futhi lymph node isimo ushintsho. Abantu abanesimiso somzimba sokuzivikela esiqinile ezifana side effects ezingajwayelekile kakhulu.
Njengoba ojwayelekile, ukwelapha imiphumela yokugoma kungadingeki, iyiphi yokusabela kuya wokugoma sihamba ngokushesha impela futhi ngokuzimela. With ukuthuthukiswa komzimba ngempela kudingeka edonsa antihistamine, uchwepheshe esimisiwe.
Yini kungaba wokugoma esiyingozi?
Abaningi besaba ukuthi lokugoma ngokumelene upokisi izingane kungabangela ukutheleleka nokuthuthukiswa isifo. imicabango yabantu okunjalo ngalutho iqiniso, emva kusungulwa umgomo ingane yakho ayifuni abe yingozi kwabanye futhi awukwazi sengilalele. Ukwethulwa kwe izidakamizwa kuhilela ukufakelwa igciwane attenuated, okuyinto umane akakwazi avuse ukutheleleka.
Imijovo yokugoma ngokumelene upokisi ingane ezweni lethu abazenzi ngesisekelo yokugoma eziningana zakwamanye amazwe. Kuye ngalokho ithuluzi obukhethelwe umjovo, kanye nokusentshenziswa wesifunda kuyahluka kwengoma. Kukhona izindlela ezimbili eziyinhloko okuvimbela upokisi:
Ngesisekelo zomuthi Belgian "Varilriks" (uma iminyaka engu-12, kabili ne esingaba 2 kuya ku-3 izinyanga, intsha kanye nabantu asebekhulile).
Ngesisekelo izisebenzi Japanese "Okavaks" (uma kunjalo).
Ukwethulwa izidakamizwa Kwenziwa phansi kwesikhumba, kodwa ezimweni ngazinye futhi bavunyelwe ukuba ukwakhiwa esicutshini.
Ukugonywa ngokumelene upokisi izingane akuwona umcimbi saziso. Okungenzeka ukuba bagome esibhedlela wesifunda, udokotela, futhi isikhungo sezokwelapha ikhokhwe. Ngaphambi ufaka onguchwepheshe izidakamizwa ngeke ahlole ingane bese unquma ukuthi kungenzeka enifeza imijovo ngalesi sikhathi.
Manje ngoba azi emibuzweni eminingi imibuzo mayelana nokuthi kungani umbukiso lokugoma ngokumelene upokisi izingane, lapho shot nokuthi uyoba yini umphumela kungase kulandelwe nokuphathwa umgomo. Kuyinto isikhathi sokukhuluma mayelana Izimo kungenzeka, izimo ezenza umjovo zokuvimbela engenakwenzeka. Ngakho, lokugoma akuyona kwenziwe nge izingane:
izinga lokushisa emzimbeni ephakeme (37.5 noma ngaphezulu).
izifo olunamandla viral, futhi esikhathini emumva (2 kuya ku-4 amaviki), kuye ngobucayi nokuvuselelwa isikhathi isifo kungenzeka mfushane.
Central izifo isimiso sezinzwa, kanye inkathi emumva kwabo (izinyanga 6, kunqunywa nguchwepheshe).
isigaba olunamandla nezifo ezingamahlala khona.
Kuhlelwe esikhathini esizayo esiseduze noma ukuhlinzwa yamuva.
Okwenzeka ochwepheshe Western
Azibheka Ngayo izingane zigonyelwe upokisi eYurophu? Lo mbuzo lungatholwa kaningi. Ezweni lethu isikhathi eside lapho Nokho babengekho yokugoma ezifweni ezinjenge,, kanye nesidingo kuqiniswa ngoba Kalula nje wayengekho.
Ngeshwa, ngokuhamba kwesikhathi, ukwelapha izimo okunzima upokisi anda kuphela, futhi yingakho kudingeka wokugoma kakhulu anda.
Ngokuphathelene isipiliyoni ongoti angaphandle, esifundweni sokuqala ukusungula izidakamizwa zokuvimbela ngaphandle kwezwe waqala ukuba kwenziwe 70-yalolucwaningo kwekhulu lama-20, imithi yokugoma iye besiba ku '80s, futhi lokugoma mass - kancane kamuva, ngo-90s .
Imibono nezeluleko wezazi kazwelonke
Abazali abaningi banesithakazelo umbono wezazi ku umbuzo indlela esiyidinga umgomo ngokumelene upokisi izingane. Komorowski, isazi sezifo zezingane zezingane owaziwa, sisekela ngokuzeleko umqondo yokugoma izingane ngenxa yalesi sifo. Phakathi kwezinye izinto, udokotela ethandwa weluleka ukuba bagcine iziqondiso ezilandelayo:
Ukuze wehlise izinqubo inhlanzeko, kodwa hhayi yokuqeda sanhlobo. Buyisela okugeza ethululela, ungakhohlwa isikhumba promakivat ngokucophelela.
Njalo agqoke izinto zangaphansi ehlanzekile izingubo umntwana, ushintsho kuyinto efiselekayo ukuqhuba izikhathi eziningana ngosuku.
Sebenzisa Zelenka asisona isisombululo sazo, futhi ukulungisa ukubukeka zokwakheka entsha esikhumbeni.
Sebenzisa kuvunyelwe kuphela antipyretics ngenxa ukuzinza of lokushisa lomzimba ephakeme.
Njalo pholisa igumbi, lapho ingane kuyinto efiselekayo ukunikeza siwuthole njalo umoya endlini.
Qiniseka ukubhekana okushisa aphakeme futhi ukujuluka yanda, lezi zici ungakwazi avuse ukulunywa owengeziwe.
Qiniseka Ukunquma izinzipho yengane yakho njengoba short ngangokunokwenzeka, ngoba kungaba nekama ekwakhekeni, okuholela nezibazi noma izibazi, izifo ekutholeni kanye nokuthuthukiswa ukuvuvukala.
Ukugonywa ngokumelene upokisi izingane: okubuyayo ezingezinhle
Ake sixoxe ngalokho pluses kanye minuses babe lokugoma ngokumelene upokisi. Ukuze uqale uhlu ezicini ezinhle lokugoma, ababiziweyo ochwepheshe kanye nabazali ukubuyekeza kwabo. Ngakho, umjovo:
Akudingi ukuhambisana nesikhathi bayashintshana ekufukameleni emva imijovo. Ingane ingahle contact kanye nontanga, ukuya esikoleni, ukuya olwandle.
Kufudukiwe emva yokugoma futhi viral imikhuhlane musa kuthinte ukwakheka amasosha omzimba ukuba Amagciwane upokisi ukumelana.
Umjovo zingenziwa ngemva kokuthintana omuntu onegciwane okuzokwenza umthelela ekubeni buthakathaka kwalesi sifo noma ukuyivimbela.
Yenza wokugoma upokisi ngokuzikhethela ngosuku nokuphathwa amalungiselelo ezivela kwezinye isifo (ngaphandle BCG mantu).
Izidakamizwa evamile ukuvikela ingane ngokumelene upokisi kufika eminyakeni engu-20.
izici ezingezinhle Yiqiniso, futhi eziningi. Ngakho, lokususa ekuphathweni izidakamizwa lesi sifo ubhekwa:
Amasosha omzimba okungukuthi impermanent (kufika ku-20 iminyaka) futhi aziphelele (ingane azi be kabi, kodwa kuyoletha isifo ngobumnene ifomu). Iningi Izibuyekezo ezingezinhle ngalokhu lokugoma lihlotshaniswa naleli phuzu, abazali abaningi bakuthola engenamsebenzi.
I ingozi yokuba nezinkinga kusukela ngokugoma.
Kunezindlela eziningana Izimo.
Isidingo kabusha ekufukuleni ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezithile ngoba izigaba ezithile iziguli (izingane iminyaka engu-12, abantu abadala).
Akufanele yini ngenze zigonyelwe upokisi ingane enquma ngamunye umzali ngamunye, cishe umntwana yakho bazokwazi ukwenza ngaphandle Kolunye uhambo siya onguchwepheshe, buthule alulame ekuguleni beseyizingane, kwathi ngenxa amasosha omzimba esinamandla unezinkinga esikhathini esizayo. Nokho, uma basengozini, udinga ukuthi ucabange ngalokhu kungenzeka yokugoma. Uma ingane yakho iyagula nge inkukhu Pox iminyaka engu-10-12, ukwethulwa izidakamizwa kusukela kungavimbela imiphumela emibi engemihle.
Diphyllobothriasis izinhlanzi. Diphyllobothriasis - Siyini ngempela lesi sifo?
Udokotela ohlinzayo, ngubani ofuna ukwenza ukufakelwa emhlabeni lokuqala ikhanda, wathi mayelana intuthuko entsha
Orizaba - Volcano lezimanga yazo zonke izinhlobo
Spirea berezolistnaya - Meyi iqhwa
Will Ukraine esethula oyobhekwa emaphoyiseni?